RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa bisha December ee Premier League oo la shaaciyay – Gool FM
(England) 14 Jan 2022. Waxaa shaaca laga qaaday xiddiga ku guuleystay abaal-marinta kan ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii December ee 2021, taasoo ay ku tartamayeen ilaa iyo toddoba ciyaaryahan oo bandhig fiican ka sameeyay horyaalka bishii la soo dhaafay.
Ciyaaryahanka Kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bishii December 2021 ugu fiicnaa horyaalka Premier League.
Sterling waxa uu abaal-marintan ku garaacay xiddigo uu ka mid yahay laacibka ay isku kooxda yihiin ee Joao Cancelo, waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee kooxda Man City oo ku guuleysta abaal-marinta xiddiga bisha ee Premier League xilli ciyaareedkan.
Xiddigaha kale Raheem Sterling uu ku garaacay abaal-marintan ayaa waxay kala yihiin James Maddison, Gabriel Martinelli, Mason Mount, Martin Ødegaard, Son Heung-min.
Si kastaba ha noqotee, Sterling waxa uu dhaliyey shan gool, isagoo sameeyey hal caawin dhammaan todobadii kulan ee Premier League oo ay guulaysatay Man City intii lagu guda jiray bishaas.